Safal Khabar - डुङ्गाको आश र त्रासमा पलाएको भविश्य
शनिबार, १७ फागुन २०७६, १३ : ३३
जाजरकोट । सल्यानको वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका– १ नाम्रा र सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाको कालीखोलास्थित भेरी नदीमा पुल नहुँदा वर्षाैंदेखि समस्या हुँदै आएको छ ।
दैनिक विद्यार्थीदेखि अभिभावकसम्म भेरी नदी डुङ्गाको भरमा वारपार गर्दै आएका छन् । यहाँ बस्ती बसेदेखि अहिले अझै कति वर्षसम्म डुङ्गाको सहारा लिएर नदी पार गर्नुपर्ने हो ? कसैलाई थाहा नभएको स्थानीयवासी बताउँछन् । अभिभावकभन्दा बढी पीडा विद्यालय उमेरका बालबालिकालाई दैनिक पर्दै आएको छ । उनीहरु भेरी नदी वारपार गर्दा होस् नै गुम्ने गरेको बताउँछन् ।
पाँच वर्षकै उमेरमा आमा, बाबाले विद्यालयमा भर्ना गरिदिएपछि भेरी नदी पार गर्दै दैनिक विद्यालय जानु अर्जुन पोखरेलका लागि त्यति सहज थिएन । राम्रो, नराम्रो छुट्याउन नसक्ने उमेरमा भेरी नदी छालसँगै पौठेजोडी खेल्दै दैनिक डुङ्गा चढेर दुई घण्टा टाढा रहेको लङ्गृणा रिवर विद्यालयमा जानु उहाँका लागि फलामको चिउरा चपाए झैँ हुँदै आएको छ ।
अभिभावकको सल्लाह, दबाब र मायाका कारण भेरी नदीको उरर्लिदो भेललाई जित्दै डुङ्गाको सहारामा दैनिक आउने र जाने भइरहन्छ अर्का कक्षा ७ मा पढ्ने सगुन आचार्यले भन्नुभयो । उहाँ जस्तै अर्का कक्षा ४ मा पढ्ने सुगम शर्माको पीडा पनि कम्ती छैन । भेरी नदीको डर मान्दा पढाइ छुट्ने, नमान्ने हो भने दैनिक डरले मुटुको धड्कन बढ्दै डुङ्गाको यात्रा गरी विद्यालय जानुपर्ने अर्को बाध्यता रहेको उहाँले बताउनुभयो । डुङ्गा चलाउँदै आएका विष्णु ओलीको भेरी नदीसँग मित्रता गाँसिएको सात वर्ष भइसकेको छ ।
उहाँले लामो समयसम्म यो काम गर्दा धेरै तितामीठा घटना व्यहोरीसकेको बताउनुभयो । ओलीका अनुसार अहिलेसम्म खासै केही भएको छैन । सल्यान नाम्रा गाउँ र सुर्खेत कालीखोलाका स्थानीयवासीको सम्बन्ध जोड्ने नै यही डुङ्गा भएको ओलीले बताउनुभयो । विवाह गरेर आउने नयाँ जोडीदेखि दुःखमा परेका अनि दैनिक कामसम्म गर्ने सबैको सहारा बन्दै आएको डुङ्गा कति दिन चल्छ उहाँलाई थाहा छैन । उहाँको प्रार्थना छ, “मैले चलाउँदासम्म कसैलाई केही नहोस् ।” नाम्रा गाउँबाट दुई घण्टा पैदल हिँडेपछि भेरी नदीको झुलुङ्गे पुल भेटिन्छ काली खोलाका हस्तबहादुर लुहारले भन्नुभयो, “गाउँबाट टाढा रहेको पुलसम्म पुग्न र आउन मात्र चार घण्टा खर्चनु, यो हाम्रा लागि धेरै समय वर्वाद गर्नु हो ।”
वर्षांैदेखि यहाँका स्थानीयवासीले पुलका लागि अनुरोध गर्दा मागको सुनुवाइ नभएको बताउँदै आएका छन् । सरकारले तुइन हटाउने लक्ष्य लिएपछि यहाँका स्थानीयवासी हाम्रो ठाउँमा पनि पुल निर्माण हुने भो भन्दै खुशी भएको बताए पनि अहिलेसम्म पुल निर्माण नहँुदा निरास हुँदै आएको बताएका छन् । नाम्रा गाउँदेखि आसपासमा अन्य गाउँका स्थानीयवासी राकम, सल्लीबजार आउन दैनिक यही भेरी नदी तर्नुपर्दछ । सुर्खेत कालीखोलाका स्थानीयवासी सोही नदी तरेर सल्यान जानुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ ।
हिउँदयाममा मात्र चल्ने डुङ्गा वर्षायाममा पूरै बन्द हुने गर्दछ । वर्षायाममा भेरी नदीमा पानीको मात्रा अत्यधिक बढ्ने भएकाले डुङ्गा बन्द हुने गर्दछ । डुङ्गा बन्द हुँदा यहाँका स्थानीयवासी तथा विद्यार्थी समस्या हुँदै आएको छ । विद्यार्थी घर आउन नपाउने भएकाले बाहिर नै डेरा खोजेर बस्ने गर्दछन् । विद्यार्थी महिनामा दुईपटक घरमा लामो बाटो प्रयोग गरेर आफन्तसँग भेटघाट गर्ने गरेको बताउँछन् । आँखाले हेर्दा नजिकै देखिने ठाउँ पनि नदीले टाढा बनाइदिएको स्थानीयवासी बताउँछन् । नाम्रा हुँदै सल्लीबजारसम्म बाटो बनाएपनि सो बाटोमा यातायातका साधन नचल्दा सास्ती हुँदै आएको हो । (रासस)
बङ्गलादेशको राजधानी ढाकाको बुरिगाङगामा अवस्थित एक नदीमा सोमबार विहान भएको एक डुङ्गा दुर्घटनामा परी कम्तीमा...
डुङ्गाको यात्रा पुनःसञ्चालन
कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि...
डुङ्गामा सामग्री ओसार्दै
पोखराको फेवातालमा घरायसी प्रयोजनका सामग्री लिएर डुङ्गामा...
फेवातालमा डुंगा पल्टिँदा एक युवक वेपत्ता
फेवातालमा सोमबार डुंगा पल्टिँदा एक युवक वेपत्ता...
१. साउने सोमबार व्रत समापन
२. दोरम्बाका ३५ जनाभन्दा बढी युवा नेकपा परित्याग गरी नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश
३. गोंगबु हत्याकाण्ड : दहीमा निद्राको औषधि मिसाइ खान दिएपछि ह्याम्मरले अण्डकोषमा प्रहार, घाँटी थिचेर हत्या
४. प्रहरीद्वारा गोँगबु हत्याकाण्ड आरोपी सार्वजनिक
५. बागलुङमा भित्रिए मरेका कुखुरा, सङ्क्रमण फैलने त्रास
६. सामाजिक दुरी र सेनीटाइजरबीच मास्क लगाएर मनाइयो पाटनमा कृष्ण जन्माष्टमी
७. महिला स्वास्थ्यकर्मी कुट्ने दुई जना पक्राउ
८. ‘जसपा’ को टिप्पणीप्रति प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको गम्भीर आपत्ति
९. नेपाल र भारतबीच भदौ १ मा काठमाडौंमा वार्ता